Ungayishintsha kanjani indawo yokugezela ngeminye imibono elula | Bezzia
USusana Garcia | 03/05/2021 20:00 | Umhlobiso, Amathrendi wokuhlobisa
Indlu yokugezela ingenye yezindawo ekhaya lethu lokho idinga imisebenzi eminingi nezinguquko uma sifuna ukuyivuselela. Kepha kungenzeka ukuguqula ukubukeka kwayo ngokuthinta okumbalwa ngaphandle kokudlula emisebenzini emikhulu noma ezinkambisweni ezinzima. Yingakho singakwazi ukuqaphela amaqhinga nemibono embalwa yokushintsha indawo yokugezela ngendlela elula eyenza sizizwe ukuthi sinesikhala esisha ngokuphelele.
Ukuvuselela izikhala akuyona into elula, kepha singakwenza ngeminye imibono. Kukhona abantu abakwazi ukushintsha izikhala zabo emakhaya ngaphandle kokwenza imisebenzi emikhulu, ukuze basebenzise lokho abanakho bese bonga imali ngoshintsho. Sizobona imibono ezosisiza ukuthi sishintshe indlu yokugezela ngendlela elula.
1 Sebenzisa upende wethayela
2 Dare ngephepha lodonga
3 Shintsha usinki nesibuko
4 Faka inhlabathi entsha
5 Faka izitshalo
6 Hlanganisa izindwangu nemininingwane
Sebenzisa upende wethayela
Enye yezinto ehlala inconywa lapho kulungiswa izikhala ngaphandle kokutshala imali eningi ukuthenga upende omuhle ukunikeza konke isandla. Hhayi nje ukuthi izindonga zizobukeka zintsha, kepha singashintsha umbala wendlu yangasese futhi wenze konke kuthathe impilo entsha. Kulokhu kufanele sisebenzise upende wethayela uma kuyilokho esinakho endlini yangasese. Kunopende abaningi, nge-matte, satin noma nge-gloss sekuqedile, ukunikeza indlu yakho yokugezela ukubukeka okusha. Lesi ngesinye sezinyathelo zokuqala okufanele uzicabangele. Ngaleyo ndlela ungashintsha ubhavu, indawo yokugeza noma zonke izindonga.
Dare ngephepha lodonga
Iphephadonga liyinto esivame ukuyisebenzisa emakamelweni okulala kanye nasemaphaseji noma emakamelweni okuhlala. Kepha akuvamile kakhulu ukuyibona endaweni yokugezela. Kodwa-ke, namuhla iyi- isici sekhwalithi ephezulu esingasetshenziswa nakwezinye izingxenye zendlu yangasese. Uma unendawo yodonga engenawo amathayili, ungasebenzisa ngokunenzuzo futhi ulinge ngesithombe sangemuva esihle ukunikeza ukubukeka kokuvuna nokubala endlini yakho yokugezela. Uma indawo yokugezela isitayela sokuvuna, umqondo muhle futhi ungenza indlu yakho yokugezela ibe yindawo enesitayela esiningi.
Shintsha usinki nesibuko
Ungakwazi tshala imali kuyunithi elisha leze kanye nesibuko. Kuyingxenye ebaluleke kakhulu yokugezela enokuningi okukhona nokuvelela. Uma singeke sikwazi ukushintsha ezinye izinto, ukufaka usinki omusha onendawo yokugcina kanye nesibuko osithandayo kungaba yindlela eyodwa yokwenza indlu yangasese ibukeke isha futhi. Izibuko ezilula, ezizungezile noma zezitayela zokuvuna zithandwa kakhulu. Ngezansi ungabeka indawo yokugcina izinto ukuze ugcine izinto ngombala okhanyayo omuhle. Kunoma ikuphi, isitayela sefenisha sizoncika kwisitayela sendlu yangasese.
Faka inhlabathi entsha
Lokhu sekuvele kungushintsho olungenziwa yiwo wonke umuntu, kepha iqiniso ukuthi kungenzeka ukushintsha iphansi ngomsebenzi omncane namuhla. Ungakhetha phansi okungukuthi ukufaka ngohlelo lokuchofoza phansi kwe-vinyl ezilingisa ukhuni. Zikhona ezinemibala emihle impela futhi zenza isikhala sibonakale sesesimanjemanje kakhulu futhi esamanje ngokumane usengeze phansi esinawo uma ngabe sesiphelelwe yisikhathi.
I-Las izitshalo zinikeza umbala futhi zinika impilo kukho konke. Kungakho kungaba umqondo omuhle ukuhlobisa izikhala. Ukungeza izitshalo nezimbali kungeza ukuthinta kwe-bohemian nokukhethekile kunoma yisiphi isikhala. Endabeni yokugezela, kufanele sengeze izitshalo ezimelana nendawo enomswakama evame ukuba khona, ngoba uma kungenjalo ngeke zisinde. Kepha kukhona ezinye izitshalo ezifanele lezi zikhala.
Hlanganisa izindwangu nemininingwane
Enye into ongayenza Ukushintsha kalula yizindwangu nemininingwane emincane, nayo ezokwenza umehluko omkhulu. Bheka amathawula afanayo neminye imininingwane futhi uzobona ukuthi lezi zinhlanganisela zinikeza ukuhlangana okuthile esikhaleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ungayishintsha kanjani indawo yakho yokugezela ngendlela elula